Brackish mvura kurapwa hurongwa (HMJBKRO series) - China Xi'an Homey Technology
Brackish mvura kurapwa hurongwa (HMJBKRO series)
yakakwirira munyu kuramba brackish neizvi osmosis hurongwa 3000GPD chikwata ichi chinoshandiswa kubata mvura brackish pamwe TDS pamusoro 7000ppm pamwe kupora mwero upto 70%. The chikuru conponents wegadziriro vari Multi nhau Sefa, kusashanda kabhoni Sefa uye brackish mvura desalination unit.With mukuru munyu Kurambwa uye pasi simba sonsume, zviri zvakare nyore chokugadza yokuzvigadzirisa. The chigadzirwa ndiyo CE vanopupurirwa nezvakanaka unhu. Brief Introduction: 1, Use DOW FILMETEC Design Software kuverenga uye vatevedzere, ...
Nyorai: Brackish mvura kurapwa hurongwa
Raw mvura TDS: pazasi 15000ppm
Output mvura TDS: isingasviki 600ppm
Frame: Carbon simbi
Driving injini: 380V 50HZ 3 danho
yakakwirira munyu kuramba brackish neizvi osmosis hurongwa 3000GPD
chikwata ichi chinoshandiswa kubata mvura brackish pamwe TDS pamusoro 7000ppm pamwe kupora mwero upto 70%. The chikuru conponents wegadziriro vari Multi nhau Sefa, kusashanda kabhoni Sefa uye brackish mvura desalination unit.With mukuru munyu Kurambwa uye pasi simba sonsume, zviri zvakare nyore chokugadza yokuzvigadzirisa. The chigadzirwa ndiyo CE vanopupurirwa nezvakanaka unhu.
1, Shandisa DOW FILMETEC Design Software kuverenga uye vatevedzere, kupa dzidziso guidline nokuda patani
2, magadzirirwo zvakasiyana gadziriro maererano kudyisa mvura yepamusoro uye inodiwa vanokwanisa, kuti B2K akatevedzana kushandiswawo yakatsvuka mvura nomunyu kugutsikana 5000ppm-15000ppm. Kana munyu zviri pamusoro 15000ppm pls sarudza SW Dzokushandisa yomugungwa
3, Unique yakachena mvura otomatiki yokutsiva mudziyo kutsiva Kuisa pfungwa pachinhu iri Kamudzira nemvura yakachena kana hurongwa rinomira kuderedza kusvibiswa Kamudzira, saka yakareba upenyu basa uye mari yakaderera.
4, Carbon simbi zvemapuranga uye Stainless simbi puranga kuti sarudzo, mavhiri zvinofamba anogona kuiswa kuti kuisa zvinhu zvakasiyana
5, Stainless simbi uye SCH80UPVC mapaipi pamwe yepamusoro kuitira hapana leakage uye pasi ngura pasi kumusoro kumanikidzwa
Raw mvura pombi + silica jecha Sefa + rinoita kabhoni Sefa + softener + micron Sefa + yakakwirira kumanikidzwa pombi + Ro hurongwa.
Power zvitengeswa iri 220 / 380V, 50Hz / 60Hz kuti hako. The furemu ndiyo kabhoni simbi uye Stainless simbi hako.
HMJBK9RO seires- Kuti vabate yakatsvuka mvura pamwe TDS isingasviki 9000ppm
HMJBK15RO seires- Kuti vabate yakatsvuka mvura pamwe TDS isingasviki 15000ppm
1.DOW Kamudzira 2.FRP nevezera mudziyo 3.sediment Sefa 4.SS Centrifugal mukuru presure pombi
5.cleaning hurongwa 6. yakachena mvura yokutsiva hurongwa 7. kabhoni simbi Coated puranga
8.PLC otomatiki kuzvidzora
1.multi-nhau Sefa 2.activated kabhoni Sefa 3.stainless simbi furemu
Previous: Standard Ro mvura kurapwa maitiro (HMJRO-6000LPH)